नेपालगञ्ज र काठमाडौंमा गुड्दै मुगुका सरकारी कार्यालयका सवारी साधनहरु ! « News24 : Premium News Channel
नेपालगञ्ज र काठमाडौंमा गुड्दै मुगुका सरकारी कार्यालयका सवारी साधनहरु !
मुगु । मुगुमा सरकारी सवारी साधन दुरुपयोगले हदै नाघेको छ । जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयको लागि खरिद गरिएको सवारी साधन व्यक्तिको मोजमस्तीमा नेपालगञ्ज,काठमाडौं र सुर्खेत शहरमा गुडिरहेका भेटिएका छन् ।
सरकारी कार्यालयको नाममा खरीद गरिरहेका सवारीहरु विगत ३÷४ बर्ष देखि कार्यालयका प्रमुखहरु र कर्मचारीले आफनै घरमा राख्ने गरेका छन् । २०६७ सालमा साबिकको जिविस अन्र्तगत गैह्र सरकारी संस्था डिलीपले ९७ लाख रकममा खरीद गरेको ५६३ नम्बरको निशान पिकअप गाडी हाल सम्म मुगुको माटो समेत टेक्न पाएको छैन् । नेपालगञ्ज राझा एयरपोर्टको पार्किङमा राखिएको सो गाडी मुगुबाट नेपालगञ्ज झरेपछि जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिहरुले प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय मुगुको नाममा पनि २ वटा सवारी साधन खरिद गरिएको छ । जसमा एक मोटरसाईकल र एक स्कुटी रहेका छन् । मोटर साईकल भने मुगुमै छ तर स्कुटी भने महिला तथा बालबालिका कार्यालयको प्रमुख हसिना सुबेदी पराजुलीले काठमाडौंमा प्रयोग गर्दै आएकी छन् । प्रमुख पराजुली मुगु जिल्लाबाट सरुवा भएको ४ महिना हुँदा पनि त्यहि स्कुटी प्रयोग गरिरहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालय मुगुले जनाएको छ ।
जिल्ला हुलाक कार्यालयले गत पुस महिनामा खरीद गरेको मोटर साईकल पनि मुगुमा ल्याइएको छैन । मुगुमा कुनै पनि कर्मचारीलाई चलाउन नआउने र जिल्लामा ल्याए पनि मोटर साईकल राख्ने ठाँउ नभएकाले नेपालगञ्जको कोहलपुरमा राखेको निमित्त हुलाक कार्यालयका कार्यालय प्रमुख नाग्मल शाहीको जिकिर छ । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने मुगुका सरकारी कार्यालयका नाममा खरिद गरिएका सवारी साधन जिल्लामा ल्याउ कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छ ।
२०६९साल पुस १ गते बाट मुगुको सदरमुकाम गमगढी बजारमा राष्ट्रिय सडक सन्जालमा जोडिए पछि सरकारी कार्यालयले सवारीका साधन खरीद गर्न थालेका हुन् ।